Ukukhula kweRoma - Imbali yamandulo
Indlela iRoma yaseMandulo eyayibamba ngayo, Yandisa amandla ayo, ibe yiNkokheli yaseItali
Ekuqaleni, iRoma yayingumnye, idolophu-encinane kwimizi yabantu abakhuluma isiLatini (ebizwa ngokuba yiLatium), ecaleni lasentshonalanga ye -peninsula yase-Italy . IRoma, njengombuso (owasekelwe, ngokwembali, ngo-753 BC), akanakuze agcine amagunya angaphandle angayilawula. Kwaqala ukufumana amandla ukususela kuma-510 BC (xa amaRoma ayiphonsa ukumkani wabo wokugqibela) kude kube phakathi kwekhulu lesi-3 leminyaka BC Ngaloo - ixesha lamaRiphabliki yokuqala, iRoma yenza kwaye yaphule izivumelwano kunye namaqela angummelwane ukuze ancede unqobe amanye amaxeko.
Ekugqibeleni, emva kokuphinda ahlaziye amaqhinga akhe emfazwe, izixhobo, kunye neenqwelo, iRoma yavela njengenkokeli engabonakaliyo yaseItali. Ukukhangela okukhawulezayo ekukhuleni kweRoma kubonisa iziganeko ezikhokelela ekulawuleni kweRoma phezu kweso siqhelo.
Ukusekwa kweNkundla yaseRoma
I-Etruscan ne-Italic Kings yaseRoma
Ekuqaleni kwesiqalo sembali yayo, iRoma yalawulwa ookumkani abasi-7.
Owokuqala wayenguRomulus , okhokho lwakhe olulandelwa kwiTrojan (iMfazwe) isikhulu esingu-Aeneas.
Ulandele ukumkani waseSabine (ummandla weLatium enyakatho-mpuma yeRoma), uNuma Pompilius .
Owesithathu ukumkani wayengumRoma, uTullus Hostilius , owamkela iAlbania eRoma.
Inkosi yesine yayingumzukulu kaNuma, uAncus Martius .
Emva kwakhe kufika ookumkani abathathu base-Etruscan,
Tarquinius Priscus ,
umkhwenyana wakhe uServius Tullius , kunye
Indodana kaTarquin, ukumkani wokugqibela waseRoma, owaziwa njengeTarquinius Superbus okanye iTarquin Iqhayiya.
I-Etruscans yayise-Etruria, indawo enkulu ye-peninsula yaseItaliki enyakatho yeRoma.
7 iiKumkani zaseRoma
Ukukhula kweRoma kuqala
AmaRoma axoshela ukumkani wabo wase-Etruscan kunye nezihlobo zakhe ngokuthula, kodwa kungekudala emva koko kwafuneka balwe ukuze balondoloze. Ngelo xesha amaRoma ayeyitshise i-Etruscan Porsenna, e-Aricia, kwanoyiko lolawulo luka-Etruscan lamaRoma lwaluphelile.
Emva koko i-Latin city-states, kodwa ingabandakanyi iRoma, ibambene ngokubambisana kunye neRoma. Ngoxa bebethatana, ama-Latin allies ahlaselwa ngabantu abavela ezintabeni. Ezi zizwe zahlala empuma yeApennines, intaba ende ende eyahlula iItali ibe kwicala langasempuma nelentshonalanga. Izizwe zentaba zicatshangelwa ukuba zihlasele ngenxa yokuba zazifuna umhlaba obalaseleyo.
IRoma kunye neeLatin zenza izivumelwano
AmaLatin ayengenalo umhlaba owongezelelweyo ukunika iintlanga, ngoko, malunga ne-493 BC, amaLatins - ngeli xesha kunye neRoma - asayinwe isivumelwano sokuzikhusela esibizwa ngokuba yi- fosius Cassianum , esilesiLatini seCassian Treaty.
Emva kweminyaka embalwa kamva, malunga ne-486 BC, amaRoma enza umnqophiso kunye neentlanga zabantu, iHernici, ababehlala phakathi kweVolsci kunye ne-Aequi, eyayizizwe zentaba zasempumalanga. Ukugqitywa eRoma ngamanyathelo ahlukeneyo, i-ligue ye-Latin-states, iHernici, neRoma ibunqobe iVolsci. IRoma yaza yahlala eLatin naseRoma njengabalimi / abanini-mhlaba kwintsimi.
IRoma iya kwandisa kwiViii
Ngo-405 BC, amaRoma aqalisa umzabalazo oneminyaka eli-10 engavumelekanga ukunyusa isixeko sase- Etruscan saseViii. Ezinye izixeko zase-Etruscan zahluleka ukulungiselela ukukhusela iVeii ngendlela efike ngexesha.
Ngeli xesha elinye le-Etruscan ilungu leedolophu zafika, zavalwa. UCamillus wabakhokela amaRoma kunye namabutho ahlangeneyo ukuba anqobe eVeii, apho abulala amanye ama-Etruscans, athengisa abanye ebukhosini, waza wongeza umhlaba kwiindawo zaseRoma ( ager publicus ), eninzi yanikwa iRomebei ihlwempu.
Imfazwe yaseLake Regillus
Ukubuyisela okwesikhashana kwi-Growth yaseRoma
I Sack of Gauls
Ngekhulu le-4 BC, i-Italy yahlaselwa yi-Gauls. Nangona iRoma isinda, kubonga ngokuyinxalenye kwi-Capitoline yase-Capitoline eyaziwayo, ukulwa kwamaRoma kwi-Battle of the Allia yahlala yindawo embi kuyo yonke imbali yaseRoma. AmaGauls ashiya iRoma kuphela emva kokuba anikwe ubuninzi begolide. Emva koko bahlala phantsi, kwaye abanye (iiSenones) benza izivumelwano kunye neRoma.
IRoma Ilawula I-Italy Ephakathi
Ukunqotshwa kweRoma kwakwenza ezinye iidolophu zaseItaliki zithembeke ngakumbi, kodwa amaRoma awazange ahlale phantsi. Bafunda kwiimpazamo zabo, baphucula impi yabo, balwa ne-Etruscans, i-Aequi, neVolsci nge-10 ukuya kwe-380. Ngama-360, i-Hernici (i-Rome yangaphambili eyayingeyona iLatin yesivumelwano eyayincedise ukunqoba iVolsci), kwaye Izixeko zasePaleni kunye neTibur zidibanisa neRoma, ziphumelelanga: iRoma yabongeza kwintsimi yayo.
IRoma iphoqelele umnqophiso omtsha kwiintetho zakhe zaseLatini ezenza iRoma ibonakale. ILatin League, kunye neRoma ekhanda layo, yatshintsha idibano yeedolophu zase-Etruscan.
Phakathi kwekhulu le-4 BC, iRoma yajika ngasentla, eKampania (apho iPompeii, uMt.Vesuvius neNaples zikhona) kunye namaSamnites. Nangona yathatha kwada kwaqala ekuqaleni kwekhulu leminyaka yesithathu, iRoma yawayisa amaSamni kwaye yaxhoma yonke indawo ephakathi kweItali.
I-Annexes yase-Italy yase-Italy
Ekugqibeleni iRoma yajonga kuMagna Graecia ngasemazantsi eItali waza walwa neNkosi Pyrrhus kaEpirus. Ngoxa uPyrrhus wayinqobile amabini ama-2, amacala omabini asweleka kakubi. IRoma yayinokunikezelwa kwamandla angapheliyo (ngenxa yokuba yayifuna imikhosi yamanyeneyo kunye nemimandla eyinqaba). UPrrrhus kakhulu kunabo bantu ayebazise naye u-Epirus, ngoko ukuphumelela kwePyrhihi kwaba nzima kakhulu kunomnqobi kunokuba utshathwe. Xa uPrrrhus elahlekelwa yimfazwe yesithathu kunye neRoma, wasuka e-Italiya, washiya e-Italiya e-Italy waya eRoma. IRoma yaye yabonwa njengongamileyo kwaye yangena kwizivumelwano zamazwe ngamazwe.
UKumkani uPrrrhus kaEpirus
Umzali kunye neMpi yePyrrhic
Isinyathelo esilandelayo kwakufuneka uhambe ngaphaya kwe-peninsula yaseItaliki.
> Umthombo: Cary and Scullard.
Amaphondo olawulo lwaseRoma (i-Circa ye-120 CE)
Wall of Hadrian - Umlando weBritish Wall Wall
Yintoni Eyithatha Ukuba YiPolisa kunye noMculi Wemifanekiso Yengqungquthela?